Xiisad Dagaal oo ka dhex taagan dalalka Jabuuti Iyo Eritra | SAHAN ONLINE
Xiisad Dagaal oo ka dhex taagan dalalka Jabuuti Iyo Eritra
JABUUTI – Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ku eedeeyey dalka ay deriska yihiin ee Eritrea in ay ciidamo badan geyser xadka ay muransan yihiin labada dowladood.
Illaa hadda majirto cid madax bannaan oo arrintan cadeysay iyo Jawaab kasoo baxday dalka Eritrea toona.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dalkiisu doonayo in khilaafka lagu dhameeyo si nabbed ah balse ay diyaar u yihiin dagaal haddii lagu fursan waayo.
Wasiirka hadalkiisa ayaa soo baxay kadib markii ciidamadii nabad ilaalinta Qadar ee joogay xadka labada dal u dhaxeeyey ay ka baxeen sababtuna ay ahayd markii labadaas dal ee ku yaala Afrikada Bari ay labaduba la sateen Sacuudiga Carabiya oo ay Qadar isa seegeen.
Dalalka Jabuuti Iyo Eritrea ayaa ku dagaalamay soohdinta u dhaxaysa sannadkii 2008-dii balse markii dambe waxay aqbaleen in Qadar ay dhexdhexaadiso oo ay ciidamo nabad ilaalin ah usoo dirto.
Jabuuti ayaa xiligan xulafo la ah dalalka reer galbeedka oo waxaa dalkeeda saldhigyo ciidamo ku leh Faransiiska Iyo Maraykanka ,sidoo kale waxaa dekedeeda wax kala soo dega oo ka dhoofsada dalka Itoobiya.
Eritrea qudheedu xiriir wanaagsan lama leh reer galbeedka ,waxaana horay loogu eedeeyey in ay taageerto kooxaha kacdoonka ka wada Soomaaliya iyo meelo kale oo gobolka kamid ah balse eedahaas wey beenisay.